Iindaba - 2018 Sichuan Ju Neng Autumn Canton Fair iphele ngempumelelo
2018 Sichuan Ju Neng Autumn Canton Fair iphele ngempumelelo
Ngentsimbi yesi-6 ngoNovemba 4, i-2018, i-Autumn Canton Fair, eyayizinyaswe nguSichuan Ju Neng, yagqitywa ngempumelelo!
Lo mboniso uthathe iintsuku ezi-5 kwaye wafumana inani labathengi be-127 baphesheya abavela kwihlabathi lonke.Abathengi babonakalise umdla omkhulu kwiimveliso ezingalukwanga ezinyibilikayo kwaye bavakalise iimfuno zabo zokuthenga.Le ndlu ikwiholo yezixhobo zonyango.Uninzi lwabathengi ngamayeza.Iingcali zentsimi zinamandla amakhulu kwimarike ye-nonwovens zonyango.
Okokuqala, ukuhanjiswa kwabathengi
Abaxumi abeza kwidokodo babefumaneka ikakhulu kuMbindi Mpuma, eMzantsi-mpuma Asia, eMzantsi Melika naseOstreliya.Phakathi kwabo, i-Indonesia, i-Singapore, i-Indiya kunye nabanye abathengi babalelwa kuninzi, abathengi abavela kwihlabathi lonke babenobuhlobo kakhulu, kwaye i-80% yabathengi basebenzisa inkonzo ye-China WeChat yonxibelelwano lwemihla ngemihla.Landela ukunika uncedo.
Okwesibini, imfuno yeemveliso ezingalukwanga
Kwilaphu lemaski elinyibilikisiweyo, ipali yokufunxa ulwelo, imaski, umqhaphu ofunxa ioyile, ilaphu lokusula kunye neemveliso ezingalukwanga, iimaski, ngakumbi iimaski eziprintiweyo, zinabona bathengi baninzi, zilandelwa kukufunxa igazi. iipads.Ukucoca usula, uninzi lwabathengi bafumene iisampulu zokubonisa iinjongo zentsebenziswano yexesha elide.
Okwesithathu, ipropaganda yopapasho iluncedo
Ngeenzuzo zeSichuan Ju Neng njengomvelisi, izixhobo ezithunyelwa kwamanye amazwe njengesiseko somgangatho ozinzile, ilaphu elinyibilikayo lithatha i-electret masterbatch yaseCalifornia, egcina ukusebenza kwezinto iminyaka eyi-3-5, ingcono kakhulu kunokuba uninzi lwabavelisi basekhaya banokugcina kuphela. .Ngexesha elifutshane leenyanga ezi-5, iteknoloji yokushicilela ekhethekileyo nayo yamkelwe kakuhle.Ngezi nzuzo, siya kwandisa ukuzithemba kwabathengi bethu kunye nentsebenziswano yethu.
ISichuan Jueneng Filter Materials Co., Ltd. ifumene abathengi abaninzi abadala kumboniso.Abathengi bavakalise ukwaneliseka yintsebenziswano yangaphambili kwaye babeka phambili izimvo zobuchwephesha ukwenza intsebenziswano igudiseke ngakumbi.Lo mboniso uthandwa kakhulu kwaye nguye kuphela imyuziyam yezixhobo zonyango.Umenzi welaphu elingalukiweyo elinyibilikayo, lo mboniso ufumene iziphumo ezilungileyo, ndizokubona kwixesha elizayo kwiCanton Fair!
Ngolwazi malunga neemveliso ezinyibilikayo, qhagamshelana noNksz Li: +86 18116628077
Iimveliso ezishushu - Imephu yesiza - AMP Mobile Imaski ekhuselayo yaseTshayina, Imaski yePPE, Imaski yaseTshayina, Pharmacy Surgical Mask, FFP2 Isiphefumlo, Imaski yobuso,